बागलुङमा सिंगो गाउँ नै एमालेमा प्रवेश !
बागलुङ। ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ३ घोसाखानीको सिंगो गाउँ एमालेमा प्रवेश गरेको छ । नेकपा एमाले ढोरपाटन नगरपालिकाले मंगलबार बुर्तिबाङ बजारको दरवार होटेलमा पार्टि प्रवेश कार्यक्रम आयोजना गरेर उनीहरुलाई एमालेमा भित्र्याएको हो ।
ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ३ घोसाखानीको सिंगो गाउँ एमालेमा प्रवेश गरेको छ । नेकपा एमाले ढोरपाटन नगरपालिकाले मंगलबार बुर्तिबाङ बजारको दरवार होटेलमा पार्टि प्रवेश कार्यक्रम आयोजना गरेर उनीहरुलाई एमालेमा भित्र्याएको हो ।
ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली सहित नगरपार्टिको कार्यक्रममा उनीहरु खादा र अविर लगाएर विभिन्न पार्टि परित्याग गर्दै एमाले प्रवेश गरेको जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट पूर्व वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र विक सहित काँग्रेस, माओवादीका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता र समथैकहरु सबै एमाले प्रवेश गरेका छन् ।
यो पनि – काठमाडौं । नेकपा एमालले प्रथम विधान महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष मण्डलको घोषणा गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल घोषणा गरिएको हो ।
अध्यक्ष मण्डलमा उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली तथा अष्टलक्ष्मी शाक्य एवम् स्थायी कमिटी सदस्यहरु रामबहादुर थापा (बादल), सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सत्यनारायण मण्डल र छविलाल विश्वकर्मा रहेका छन् ।
अध्यक्ष मण्डलमा उपाध्यक्ष भीम रावल भने अटाएनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको ईञ्चार्जको जिम्मेवारी नपाएपछि असन्तुष्ट रहेका रावल विधान महाधिवेशनको अध्यक्ष मण्डलमा समटिएका छैनन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर आएका स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा पनि समेटिएका छन् । माधव नेपाल समूह छोडेर एमालेमा बसेका उपाध्यक्ष रावलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
साथै उनले पार्टीलाई २०७५ साल जेठ दुई कै परिस्थितबाट अघि बढाउनुपर्ने र आफूले पाएको पुरानो जिम्मेवारी सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
विधान महाधिवेशनका लागि यस्तो बन्यो अध्यक्ष मण्डल, उपमहासचिव हटाइयो- काठमाडौं । नेकपा एमालले प्रथम विधान महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष मण्डलको घोषणा गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल घोषणा गरिएको हो ।
अध्यक्ष मण्डलमा उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली तथा अष्टलक्ष्मी शाक्य एवम् स्थायी कमिटी सदस्यहरु रामबहादुर थापा बादल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सत्यनारायण मण्डल र छविलाल विश्वकर्मा रहेका छन् । यस्तै एमालेमा पाँच जना उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरिएको छ । शुक्रबारबाट सुरु भएको प्रथम विधान महाधिवेशन प्रस्तावमा पाँच जना उपाध्यक्षको प्रस्ताव गरिएको हो ।
उपमहासचिव विष्णु पौडेलले विधान महाधिवेशनमा विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । यसअघि एमालेमा ४ जना उपाध्यक्ष रहेका थिए । साथै ६ जना सचिव रहने गरी विधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले एमालेमा ५ जना सचिव रहेका छन् । केन्द्रीय पदाधिकारीसमेत गरी २२५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै १ अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष, १ सचिव रहने गरी १२ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग र लेखापरीक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित गर्ने पनि विधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा उपमहासचिवको व्यवस्था भने गरिएको छैन । अहिले एमालेमा २ जना उपमहासचिव रहेका छन् ।
एमाले विधान महाधिवेशन : झोलाभित्र के छ ?- काठमाडौं । नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूलाई प्रवेशद्वार नजिकै झोला वितरण गरिरहेको छ । एमालेले दिएको झोलामा पार्टीको प्रस्तावित सांगठनिक, राजनीतिक र विधान मस्यौदा राखिएको छ ।
कापी नदिएको झोलाभित्र एउटा डटपेन राखिएको छ भने झोलाभित्र स्यानिटाइजर, मास्कजस्ता कोभिड सुरक्षा मापदण्ड सम्बन्धी कुनै पनि सामग्री राखिएको छैन । एमालेले कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै मास्क, स्यानिटाइजर र थर्मलगनको प्रयोग गर्ने भने पनि थर्मलगन कतै प्रयोग भएको छैन । महाधिवेशन प्रवेशद्वारमा स्याइनिटाइजर र मास्क भने वितरण गरिएको छ । सूर्य चिह्न अंकित कपडाको झोला महाधिवेशन प्रतिनिधिले मात्र पाएका छन् ।
पहिलो पटक शुभकामनाबिनै हुँदै छ एमाले महाधिवेशन – राजनीतिक दलका अधिवेशन र महाधिवेशनमा अन्य दलका नेता तथा शीर्ष नेताले शुभकामना दिने परम्परा तोड्दै एमालेले विधान महाधिवेशन सुरु गरेको छ ।
पार्टीका महाधिवेशनहरूमा विगतमा शुभकामना दिन विभिन्न दलका नेताहरू आमन्त्रण गरिन्थ्यो । तर, एमालेले भने यस पटक कुनै दलका नेताहरूलाई शुभकामना दिन नबोलाएको महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए ।
तामाङका अनुसार महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा दलका अन्य नेतासमेत बोल्ने कार्यक्रम छैन । ‘अध्यक्षज्यू (ओली)ले सम्बोधन गरेपछि सोझै पार्टीका दस्तावेज प्रस्तुतिको क्रम सुरु हुन्छ’, तामाङले भने ।